Zuva: Chivabvu 16, 2020
EFT transaction inogona kuitwa yakananga kubva kuPTTBank account yakapinda muCentral Bank EFT system. Inosangana neTurkey imwe yevatengi hukuru hwemari yezvivakwa zvemari pttbank, zviuru zvishanu zvebasa, ATM padyo nemazana mana, [More ...]
Mutungamiri Recep Tayyip Erdoğan vakapinda Çanakkale 1915 Bridge Tower Kupedzisa Ceremony nemusangano wevhidhiyo pamwe negurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu Adil Karaismailoğlu. Erdoğan naKaraismailoğlu pamhemberero yekupedzisa rimwe remabhawa ebhawa [More ...]
Nechitenderedzwa cheUshumiri hweMukati, nguva dzanhasi dzichashandiswa kuyambuka Istanbul musi wa 16-17-18-19 Chivabvu. Kuitira kudzivirira vagari vedu vanofanirwa kushanda nekuda kwebasa ravo rekumanikidzirwa uye vashandi vehutano panguva yekurambidzwa, [More ...]
Akçaray Trams Akafukidza 85 zviuru Makiromita pamwedzi
Kocaeli Metropolitan Municipality Akçaray tram yakafamba makiromita makumi masere nemasere mumwedzi wapfuura, ichipa basa rekufambisa nekukurumidza, rakagadzikana uye rakachena kune vagari. Kupfuura Akctaray tramu, iyo yakava chiratidzo cheguta [More ...]
Ekrem İmamoğlu's Istanbul Bus Station Kuzivisa
İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu akaongorora mabasa ekugadzirisa paGrand Istanbul Bus terminal, inova hope dzinotyisa dzevagari mumakore apfuura. İmamoğlu akati, "Isu, takanganwa Istanbul Bus Station, yakange yakanganikwa." [More ...]
Imamoglu, mutakuri weBandirma Ferry
İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu akadanwa kubva kuGalata Quay, nzvimbo yekutanga yeAtatürk kufamba kubva kuIstanbul kuenda kuSamsun neBandırma Ferry: [More ...]
Iyo yemhasuru yemotokari sinema chiitiko che İzmir Metropolitan Municipality yakapupurira mifananidzo yakajeka. Zvizvarwa zveIzmir, avo vakatadza kusiya misha yavo nekuda kwematanho ekoronavirus, vakawana tsika pamwe chete panguva imwe cheteyo nekutarisa firimu pazhanhatu. Izmir Metropolitan Municipality [More ...]
Mabiko Kukurudzira neIpfuma Treasure Hunt paMay 19
Izmir Metropolitan Municipality inounza mufaro waMay 19 kune dzimba mukati memazuva eCona. Pamusoro pezviitiko zvakawanda zvinoburitswa pamapuratifomu edhijitari, zvakare inoronga makwikwi anonzi Online Treasure Hunt. 7 maawa 19 maminitsi [More ...]
Bayraktar TB2 UAV Kusvitswa kune General Directorate Yekuchengetedza
Baykar Defense yakaendesa mamwe matatu Bayraktar TB2 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) kuAvation department reGeneral Directorate of Security. Pamusoro penyaya, Mutungamiri weTurkey Hutungamiri, Dziviriro Indasitiri. Dr. Ismail [More ...]
UAV Base Yakagadzwa muCizre Dunhu re Şırnak
A Tactical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Command yakagadzwa pasi peGendarmerie General Command yeBayraktar TB2 mhando SİHA muCizre mudunhu re ofŞrnak. Mune chirevo chakaitwa negurukota rezvemukati meSüleyman SOYLU, [More ...]
Isu tiri Vokutanga kuEurope uye Chipiri muNyika muVhena Zvigadzirwa Zvekugadzirwa
Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank, wechena wezvinhu, ndiye weTurkey anotarisana nechiso, "huwandu hwekugadzira, huwandu, huwandu hwakawedzerwa uye hunobatsira nyika yedu nekutengesa zvinhu kunze kunotamba chinzvimbo mukusimudzira. Pedyo nekukwana [More ...]
ALO Mitsetse Vanoenderera Kupa Musingavhiringidzwe Basa Kune Iyo Citizen
Iyo 'ALO' mitsara, ichishanda pasi pekubatana kwePanhau Reruzivo Rwekudyidzana Nehunyanzvi, Ministry of Family, Labour uye Social Services, vari kudiwa zvakanyanya munzira yekurwisa rudzi rutsva rwe coronavirus. Mhuri, Vashandi uye Gurukota revanhu Zvemagariro Zehra [More ...]
Panguva imwe cheteyo mukati menyika yese kutarisa kana sarudzo dzakatorwa nebazi rezvemukati, General Directorate of Security, Gendarmerie General Command uye Coast Guard Command zvikamu mukati mechinzvimbo chemhando itsva coronavirus (Covid-19) matanho anoitwa. [More ...]
Zvinoenderana neshoko re Ministry of Internal Affairs, maererano ne meteorological data, pane kuongororwa kwekupisa kwemhepo musi weSvondo, Chivabvu 17, pamusoro pemirairo yeMutungamiri Recep Tayyip Erdoğan, chirwere chisingaperi chine makore makumi matanhatu zvichikwira. [More ...]
Holistic Kuchengetedzwa Kwakajeka muMapurisa Academy's Kovid-19 Ripoti
Mumushumo wakagadziriswa neMutungamiriri wePolish Academy, zvakataurwa kuti zvakaitika panguva yedenda zvaratidza kuti nzira dzekuchengetedza hadzi dzakaringana, uye kuti nzira yakazara yekuchengetedza inozikanwa munzvimbo ino. Kovid-19 Kuputika uye Beyond International [More ...]
Rize Logistics Center kune Tender
Mutevedzeri weAK Party Rize Mutongi Muhammed Avcı akataura kuti Rize yakapa Mutungamiri Erdoğan hunyoro hwenhau dzeLogistics Center kuti anga akamirira kwenguva yakareba uye akatenda Erdogan nekuda kwenzvimbo yemugodhi yakaunzwa kuRize. AK Party General [More ...]
4-Zuva Rakakosha Ndege chirongwa cheVaperekedzi pasi peKubvisa IZBAN; Pamazuva 16-17-18 na 19 Chivabvu, kana nguva yasvika ichaiswa; İZBAN yakazivisa kuti ichaita chirongwa chakakosha chekubhururuka chevatasvi vari pasi pechisarudzo. IZBAN's official twitter [More ...]
Infrastructure uye mugwagwa kuwedzera mabasa akatanga ne Kerpe Special Provincial Administration zvikwata mumugwagwa Keltepe Ski Center mberi. Mehmet Uzun, Secretary General weSpecial Provincial Administration, Hasan, Musoro weProvince General Assembly [More ...]
Samsun-Sivas Kalın njanji njanji, iyo yakagadziridzwa nevezvekufambiswa kwezvekutakurwa nezvivakwa uye yakanangana nekutakura mamirioni mazana matatu ezvitakura pagore, ichapa kukurudziro nyowani yekuita kwekufambisa kwemidziyo mudunhu rekuchamhembe-maodzanyemba. Turkey [More ...]
Niğde Special Provincial Administration's Front-Storey Crossroad Project iri Kuuya kuHupenyu
Niğde Meya Emrah Özdemir yakurumidzira kuedza kwayo kuziva mapurojekiti ebhuku rerojekiti panguva yekumiririra kuitira kuregedza kuyerera kwemukati mepakati peguta redu. Vanokurira vamwe muzvikamu kuti misa motokari aibuda [More ...]
Local Synthesis yeDhiza Inoshandiswa muCovid-19 Kurapa Ichazadzikiswa munaJune
Industry and Technology, Va Mustafa Varank yakashuma kuti dzomunzvimbo kwetunhu zvinodhaka zvaishandiswa pakurapa itsva mhando coronavirus (Covid-19) zvichazadziswa muna June. 17 KUTI URATIDZE IZVO ZVINOGONA Minister Varank vakatora chikamu muCovid-19 muchirongwa chaakatora muTR News chiteshi. [More ...]
70 zviuru zveTL Rutsigiro kumaSME Ekugamuchira Kudzidziswa kubva kuModel Factory
KOSGEB inotsigira kusvika 70 zviuru zveTL kumaSME ayo anowana dzidzo kubva kuModel Factory. Vazivisa mutemo uyu, Gurukota rezvemaindasitiri pamwe nehunyanzvi, Mustafa Varank akati kukosha kwekushandurwa kwemadhijitari kwakabudazve pachena panguva yedenda. [More ...]
Dzimba Dzemagetsi Kugadzira Chigadzirwa EIA Chirevo Chakavhurwa Mfungwa
Utungamiriri hweTurkey rweMotokari uye Bhizinesi Enterprise Group Inc. Mushumo weEIA pamusoro peMagetsi Car Production Center chirongwa chakarongwa kuti chivakwe nekambani chakavhurwa kuti chionekwe. Yenzvimbo Inokanganisa Kuongororwa Mvumo uye Kuongorora [More ...]
Iyo kambani yechitima inoshanda muCyprus pakati pe1905-1951 pasi pezita reCyprus Government Railway Company. Akashanda pamutsetse pakati peEvrihu musha weRedke neguta reFamagusta. Makore ekushanda [More ...]
Bulgaria guta reKardzhali guta reRusalsko Chiedza mumusha weAli Durmaz akazvarwa muna 1935, inouya kuTurkey mugore ra1950, ichisiya zvese muBulgaria, uye ivo vakatanga kugara muBursa Mudanya. Bhizinesi muhupenyu hwake hwese [More ...]